Fananana hazon-damosina (5)
Naseho ny : 29 oktobra 2021
Ny fananana hazon-damosina dia tsy midika ho fikatonana ao amin'ny tena. Ilaina ny fifandraisana sy fifampizarana amin'ny hafa, toy izany koa ny fahatokisan-tena. Mitaky faharetana sy fitozoana ihany koa ny fiainana koa rehefa manomboka zavatra iray dia ezahana mandrakariva ny hahatratra ny tanjona manoloana ireo sedra samihafa. Katesizy momba ny fananana hason-damosina, iarahana amin'i P. Rakotonarivo Fidy Isidore.
Fananana hazon-damosina (4)
Naseho ny : 28 oktobra 2021
Betsaka ireo tanora no diso fanantenana noho ny tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Isan'ny anton'izany ny hakamoana sy ny fiononana fotsiny amin'izay eo an-tanana. Mandiso hevitra azy ireo ny fampanantenana poakaty sy manodoka izay mitondra mankany amin'ny hafaliana sandoka. Ilaina ny fahaizana mandanjalanja manoloana ireny. Katesizy momba ny fananana hazon-damosina, iarahana amin'i P. Rakotonarivo Fidy Isidore.
Fananana hazon-damosina (3)
Naseho ny : 27 oktobra 2021
Maro ireo tanora no tsy mahalala ny maha-izy azy. Eo am-pifaneraserana amin'ny hafa, ao anatin'ny fanekena sy ny fanajana ny fahasamihafàna no hahafahana mitrandraka izany. Ilaina ny mahatsapa ny fifamenoana ary amin'izany no hahafantarana ny andraikitra sy ny anjara toerana eo amin'ny fiaraha-monina. Katesizy momba ny fananana hazon-damosina, iarahana amin'i P. Rakotonarivo Fidy Isidore.
Fananana hazon-damosina (2)
Naseho ny : 26 oktobra 2021
Miseho amin'ny endrika samihafa ny tahotra ao amin'ny tanora : tahotry ny tsy misy mihaino, tahotry ny tsy ho tiana, tahotra tsy ahomby, tahotra ny tsy ho fantatra. Mankahery ny tanora i Papa François fa mamela antsika hanana fo sy saina hikaroka mandrakariva i Jesoa, saina afaka mandalina sy fo hahay hifampitsinjo. Katesizy momba ny fananana hazon-damosina, iarahana amin'i P. Rakotonarivo Fidy Isidore.
Pejy 8 amin'ny 52
[Miara-dalana] Zoma 26 novambra 2021
♦ Hikatsahana sori-dalana pastôraly iombonana, sahaza ny vanim-potoana ankehitriny nefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny Sinaodin'ny Eveka 2021-2023... ♦ 18 taona nitoriana ny Vaovao Mahafaly sy nanabeazana ny Radio Fanasina Morondava... ♦ Tanterahana any Verona Italia ny 25 hatramin'ny 28 novambra 2021 ny hetsika momba ny foto-pampianaran'ny Eglizy momba ny fiaraha-monina...